Kudingeka Abameli Bendawo Be-UAE Izimfanelo Ezinhlelweni Zezomthetho | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Izimfanelo Zommeli Wendawo ye-UAE Ziyadingeka Emisebenzini Yezomthetho
Kungakhungathekisa ukuzama ukuthola ummeli wasendaweni we-UAE onomthelela onolwazi ongakusiza ekuxazululeni ezinye zezinsolo ezinzima futhi ezididayo ongase uhlangane nazo empilweni yakho.
izinga elihle kakhulu lobuqotho
uthembele futhi ungathembela
Kona Wakho Wezomthetho e-UAE
Nguwe osengozini enkulu lapho udinga ukwelulekwa ngokomthetho. Njengoba ulwa nenkinga enjalo, uthembela kubani futhi uthembele kubani? Lowo kungaba ngummeli wakho.
Ukwenza ukufunwa kwakho kube lula, nazi izimfanelo eziphezulu okufanele uzibheke kummeli:
Ngaphezu kwanoma yini enye, ufuna ukuthi ummeli wakho aqonde futhi athembeke kuwe maqondana nokungenokwenzeka. Ngesikhathi esinzima kangaka empilweni yakho, into yokugcina oyifunayo yithemba lamanga. Akunandaba noma ngabe isimo sakho sezomthetho singaba yini, ummeli wakho kufanele abe lapho ukuze akusekele ngokweqiniso.
Ngokunjalo, nommeli wakho kumele abe nezinga elihle kakhulu lobuqotho. Njengoba kuzoba yilowo ozokumela enkantolo yezomthetho, kufanele enze ngokukhulu ukuzethemba uma efuna ukuthi abanye abantu abenze umthetho babahloniphe.
Izintshisakalo zakho ezifanele kufanele zihlale ziphambili kubameli Bakho Base-UAE Basendaweni. Kumele aphathe isimo sakho ngobuhlakani ngokunokwenzeka ngangokunokwenzeka kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni.
Isipiliyoni Esibanzi Sezomthetho soMthetho we-UAE
Ummeli omuhle futhi umuntu onolwazi oluningi emkhakheni wezomthetho. Kufanele ngabe basebenzela amaklayenti avela kuzo zonke izinhlaka zokuphila nazo zonke izinhlobo zokukhathazeka kwezomthetho. Funa ummeli onolwazi olwanele ngesimo noma inkinga yakho ethile. Isibonelo, uma udinga usizo ngesehlukaniso sakho, funa ummeli onolwazi olwanele kulokhu.
Ukuhlangenwe nakho kubaluleke kakhulu ngoba lokhu kunikeza ummeli wakho ukuzethemba abakudingayo ukuze ufinyelele umgomo wakho.
Ulwazi olwanele lomthetho we-Sharia kanye ne-UAE Yasekhaya
Akukho sifundo esingaba nzima futhi sicebe njengomthetho futhi le nsimu ihlala ishintsha futhi ivela ngosuku. Ummeli wakho ngabe uchithe iminyaka ezifundweni ukufeza ukuqonda nolwazi lomthetho namasiko e-UAE abanawo njengamanje. Kufanele futhi balondoloze futhi balukhulise lolu lwazi ngokugcina bavuselelwa ngezinguquko futhi bethola uqeqesho oludingekayo.
Kukhona abameli abanolwazi olukhethekile noma ezinye iziqu ezifanelekile esimweni sakho esithile. Qiniseka ukuthi uhlola amakhono abo kanye neziqu zabo. Abameli abaningi babelana ngalolu lwazi esidlangalaleni kanye nangemvelaphi yabo yemfundo.
Amakhono Okuxhumana Okuhle kakhulu ngesi-Arabhu nangesiNgisi
Abameli Abcono kakhulu be-UAE bangumuntu onendlela yokusho izinto ngendlela ecacile futhi elula ukuyiqonda. Kufanele bazi ukuthi zizokwenza nini lula ama-jargons asemthethweni okuthile ozokwazi ukuwaqonda. Futhi kufanele zinikezwe izizathu, zihlakaniphe futhi zibukhali njengoba ziphatha icala lakho phambi kwamajaji nabanye abameli.
Kumelwe ukuthi abameli baqonde izithameli. Uzoqiniseka kuphela nommeli wakho lapho uqonda noma yini ayishoyo. Lapho uzizwa udidekile futhi ulahlekile kulesi simo, uzolahlekelwa kuphela ukholo kummeli wakho.
Uma kwenzeka uzithola uthinteke kokuthile okuphathelene nomthetho, qiniseka ukuthi uzibheka ngalezi zimfanelo ukuze ungaqiniseka ngokwazi ukuthi unommeli ofanele ngakuwe.
Sinikeza ukuzivikela okunamandla kumakhasimende aphesheya asenkingeni
Kulula kumakhasimende we-International, ofuna ukusula izingqinamba zezomthetho eDubai noma e-UAE